होमपेज / शुक्रबार / उर्वशी कि मेनका?
उर्वशी कि मेनका?	20 Jun 2013 बिहीबार ६ असार, २०७०
वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहले रीमा विश्वकर्मालाई 'उर्वशी र मेनका' भनिदिए। फिल्ममा भन्दा म्युजिक भिडियोमा बढी देखिने रीमाको सौन्दर्यमाथि टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो बताएका थिए। भारतका विभिन्न ठाउँमा छायांकन भएका भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा भिडियोमा र बाहिर रीमाको रूप हेरेपछि शाहको भनाइमा स्वर थप्ने अरू पनि थिए। उनी अभिनीत दुइटै फिल्म 'स्वर' र 'भिसा गर्ल'ले बजारमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेनन्। तर, फिल्म प्रदर्शनअघि नै उनले म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर हिट भएका कारण उनको व्यस्तता घटेन। खिरिलो ज्यान, अग्लो कद र हाँसेर बोल्ने उनको शैलीले दर्शकमात्रै होइन, निर्माता/निर्देशक समेत प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ। शाहले उर्वशी र मेनका भने पनि 'कलियुग'मा दुई अवतार लिन रीमालाई मुश्किल छ। त्यसैले आफैँले भनिदिए हुन्थ्यो, रीमा उर्वशी हुन चाहन्छिन् कि मेनका? Tweet Leaveacomment Message *
विपत्पछिको मनोविज्ञानकेस नं. १काठमाडौँ, लाजिम्पाटकी २० वर्षीया एक युवती वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि टुँडिखेलको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी थिइन्। उनले आश्रय लिइरहेको त्रिपालमा अरू पनि थुप्रै भूकम्प पीडित थिए। भूकम्प...	'अभिनय साइकल सिकेजस्तो होइन'अनुप बराल रंगकर्मीका रूपमा चिरपरिचित नाम हो। टेलिफिल्म 'दलन' र फिल्म 'दासढुंगा', 'बधशाला', 'ब्याच नं १६' लगायतबाट उनी अब्बल फिल्म अभिनेताका रूपमा पनि स्थापित भए। नेपाली नाटक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै...	भूकम्प सचेतनाले बनाउँछ सुरक्षित२०४५ साल भदौ ५ गते बिहान ५ बजे आसपासमा भएको ६.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट धरानका मात्र १ सय ३८ जनाको ज्यान गएको थियो भने २ हजार १ सय १७ घाइते...	रेखामाथि राजनीतिरेखा थापा बाठी फिल्मकर्मी हुन्। फिल्म क्षेत्रमा आफूलाई चर्चामा राख्न र अघि बढ्न अनेक नीति अख्तियार गर्ने खुबी छ उनमा। केही समयअघि एमाओवादी नेता प्रचण्डसँग नाच्नुका साथै उनले तत्कालीन वाइसियल...	चर्चाका लागि चर्तिकलाफिल्म क्षेत्रमा टिक्नका लागि, बिक्नका लागि फिल्मकर्मीले चर्चामा रहनुपर्छ। अखबार र टीभीमा छाउनुपर्छ। फिल्म चलाउन निर्माता–निर्देशकले प्रचार गर्नुपर्छ। यी सामान्य सत्य हुन्। तर, चर्चाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने...	जो निरन्तर दौडिरहेछन्खेलकुद क्षेत्रमा सुनौलो पहिचान स्थापित भइसकेको नाम हो, वैकुण्ठ मानन्धर। नेपाली म्याराथनका महापुरुष भनेर चिनिने उनले सक्रिय खेलकुद जीवनबाट सन्न्यास लिएकै साढे दुई दशक पुग्न लागिसक्यो। औपचारिक रूपमा खेल जीवन...	बिरामीसँग खेलबाड'फलानो अस्पतालको फलानो डाक्टरको लापरबाहीले हाम्रो बिरामीको ज्यान गयो, क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ'– काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता उजुरी थुप्रै परेका छन्। ज्यान बचाउने पवित्र र संवेदनशील पेशा अँगाल्ने चिकित्सकले कसैको ज्यानसँग...	'एल्बम बिकेन भनेर के रुनु?'सेमी–क्लासिकल गायिकाका रूपमा चिनिन्छन्, रीमा गुरुङ होडा। तर, उनका 'लाहुरे दाइले' जस्तो डान्सिङ नम्बर, 'नजरको दोषी बनी' जस्तो लोक–आधुनिक गीत पनि चर्चित छन्। एकताका फिल्मका गीतमा लगालग स्वर दिने उनी...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...